Ungayisebenzisa kanjani i-Hulu kunoma iyiphi idivayisi? - Ezokuzijabulisa
Hulu uhlelo lokusebenza lokusakaza oluphezulu. Ihlanganyele njalo neziteshi eziningana ezithandwayo ze-TV nezinye izinhlelo zokusebenza ukukulethela iphakethe lokusakaza 'elingabizi kakhulu'. Izengezo zikaHulu zifaka i-Live TV, i-HBO, i-Disney +, i-ESPN +, i-Starz, nokunye okuningi. Ungazifinyelela ngohlelo lokusebenza noma ungene kwezinye izinhlelo zokusebenza ngazinye.
Noma kunjalo, kungahle kudideke noma kube yinselele ukusebenzisa wonke lawa maphakheji. Kuthiwani uma ufuna ukuqala iHulu kudivayisi ngokusebenzisa ikhompyutha? Lapha unesiqondisi esigcwele sokukusiza.
Konke Okudingayo Ukwenza kusebenze i-Hulu:
Uzodinga ukubhaliswa kwe-Hulu ngezinhlelo zokusebenza ezifanele ukukusebenzisa kudivayisi enikeziwe. Ungahle udinge i-PC uma ufuna ukusebenzisa ikhodi yokwenza kusebenze. Noma kunjalo, ungakwenza ngokusebenzisa i- isiphequluli sewebhu khukhwini wakho futhi.
Ufuna Imihlahlandlela Eminye Yokuqalisa? Bheka ngezansi:
Izinyathelo Zokusebenzisa i-Hulu Kumadivayisi Ahlukile:
Kufika isikhathi lapho unamanye amadivayisi ofuna ukuwasebenzisela i-Hulu. Kodwa-ke, ngemuva kokulanda i-App, ingahle ikucele ukuthi uphinde ungene ngemvume. Ngenxa yalokho, kuzofanela ubhale phansi igama lomsebenzisi nephasiwedi futhi. Le nqubo iyaqhubeka nakwamanye amadivayisi, futhi.
Kodwa-ke, unganciphisa isikhathi osithathayo ukungena ngemvume ku-akhawunti yakho usebenzisa isici esithi 'Yenza kusebenze' esinikezwe yi-Hulu. Isici sokuqalisa esivela ku-Hulu sikunikeza ikhodi yokusebenzisa. Iyafana ne-OTP (iphasiwedi Yesikhathi esisodwa) lapho kuzofanele uthayiphe khona kudivayisi ozama ukuyenza isebenze i-Hulu.
Kungani lokhu kuyisici esisebenzisekayo? Kumadivayisi angenalo igama elingukhiye njengeGaming Consoles, kungaba matasa ukuthayipha igama lomsebenzisi nephasiwedi ephelele. Ukucasula kwakho kungakhuphuka uma uthayipha igama lomsebenzisi elingalungile noma iphasiwedi. Ngakho, ungachitha isikhathi esiningi.
Kodwa-ke, ngokulandela lezi zinyathelo, ungenza kusebenze i-Hulu ngomoya:
Landa uhlelo lokusebenza lwe-Hulu kudivayisi ofuna ukuyivula
Ngesinyathelo sesibili, kungadingeka ungene ngemvume kuqala.
Ngemuva kokungena ngemvume, iwebhusayithi izoqala ukukubonisa ikhodi yokusebenzisa
Shintshela kudivayisi ofuna ukuyivula ku-Hulu bese uvula uhlelo lokusebenza
Esikhundleni sokungena ngemvume, chofoza ku-'Kwenza kusebenze le divayisi kukhompyutha. '
Kuzoba nesigaba sokufaka ikhodi yokusebenzisa. Thayipha ikhodi oyinikezwe kuwebhusayithi
Idivayisi yakho izocushwa.
Ungayisebenzisa kanjani iDisney + noma i-ESPN + ku-Hulu?
UHulu uhlanganyele naye I-Disney + kanye ne-ESPN + ukukulethela iphakethe lokubhaliselwe kwe-combo. Ikuvumela ukuthi ujabulele iDisney + ne-ESPN + ngeHulu. Iphakethe elithengeka kakhulu kunalapho uthenga amathathu ngokwahlukana. Noma kunjalo, ukwenza izinzuzo kusebenze kuyinqubo ehluke ngokuphelele.
Uzothola i-imeyili ngemuva kokubhalisile ukuze uqhubeke nokusebenza. Ibuye ikunikeze isixhumanisi sokuvula i-Disney + ne-ESPN +. Noma kunjalo, kungaba umsebenzi odla isikhathi noma owesabekayo. Ngakho-ke, ungaphinda usebenze lezi zinhlelo zokusebenza nge-Hulu.
Khumbula, udinga ukuba nokubhaliselwe kwephakeji ye-combo ye-Hulu, Disney, ne-ESPN ukuze uyisebenzise. Manje, landela lezi zinyathelo:
Vula uhlelo lokusebenza lwe-Hulu noma vakashela Hulu.com kuwebhusayithi
Ngena ngemvume ku-akhawunti ebhalisile
Manje iya esigabeni 'sokwenza kusebenze'. Kukhona ezinye izinketho ezitholakalayo futhi
Skrolela phansi kuDisney + ne-ESPN +
Kufanele kube nenkinobho ethi 'Yenza kusebenze' eduze kwabo.
Bacindezele, ngamunye ngamunye, njengoba i-Hulu izokwenzela lezi zinhlelo zokusebenza
Usuqedile. Okubhaliselwe kuzokwenziwa kusebenze.
Qiniseka ukuthi une-Disney + ne-ESPN + efakwe kudivayisi ukwenza kube lula ngohlelo lokusebenza lwe-Hulu ukuzisebenzisa. Uma uyiqala ngesiphequluli sewebhu, ungahle ungene ngemvume ku-App ngayinye. Ngalokho, udinga ukunikeza igama lomsebenzisi nephasiwedi efanayo ne-Hulu yakho.
Ungayisebenzisa kanjani i-Hulu kusuka ku-Disney + App?
Ngaphandle kwe-combo kaHulu, kukhona ne-Disney + combo enikeza uHulu. Uma ubhalisela i-Disney + ngokusebenzisa i-combo, uzothola i-Hulu ngokuzenzekelayo. Ngalokhu, uzothola i-imeyili yokwenza kusebenze i-Hulu. Uma ungayisebenzisanga, kuzodingeka ukuthi uyiqale ngokwenza. Kodwa-ke, uma ungaqiniseki, ungasebenzisa i-Hulu yakho nge-App kaDisney.
Landela lezi zinyathelo:
Vula i-Disney + App, qiniseka ukuthi ungene ngemvume ku-akhawunti elungile
Manje, kuzofanele uye kokukhethwa kukho nemininingwane yokukhokha. Yilapho uzothola khona ulwazi olufanele
Skrolela phansi, futhi uma ukubhaliswa kwakho bekune-Hulu kwiphakeji, uzobona uHulu efakwe kuhlu
Manje, chofoza ku-'Buka manje 'eseduze neHulu
Ukubhalisa kwakho kwe-Hulu kuzokwenziwa kusebenze
Qiniseka ukuthi ufake iHulu ocingweni. Kwenza yonke inqubo ibe lula kuwe.
Ungawugcina Kanjani Umkhondo Wamadivayisi ane-Hulu Cupha?
I-Hulu ihlala ikunikeza isaziso se-imeyili noma kunini lapho kusebenze khona idivaysi entsha nge-akhawunti yakho. Kodwa-ke, uma ulahlekelwe yimeyili, kunendlela elula yokwenza. Lesi sinyathelo sikuvumela ukuthi uhlole wonke amadivayisi acushiwe ku-akhawunti yakho ye-Hulu.
Ngakho-ke, ungalawula lawa madivayisi, noma uphume kuwo uma udinga ukwenza njalo.
Okokuqala, vakashela safe.hulu.com/account
Qiniseka ukuthi ungene ngemvume bese uqhafaza ku-Watch Hulu kumadivayisi akho
Ngemuva kwalokho, uzoba nenketho yokuthi 'Phatha amadivayisi.' Chofoza kuso
Isikrini esilandelayo esizovela sizokukhombisa wonke amadivayisi acushiwe nge-akhawunti yakho ye-Hulu. Uzobona nosuku lokusebenza
Uma ufuna ukususa noma iyiphi idivaysi, ungachofoza ku-‘Khipha ’eduze kwensiza, bese uHulu ezokwenza kungasebenzi kuleyo divayisi.
Nakhoke! Manje usungakwazi jabulela iHulu noma kuphi uthanda. Lezi zinqubo zokwenza kusebenze zingalandelwa ezinye izinhlelo zokusebenza, futhi. Iningi labo linezinketho ezifanayo. Ngakho-ke ukuhlola okuncane kungakusiza ngakho. Uma unemibuzo, qiniseka ukuyithumela esigabeni sokuphawula. Futhi sizobuyela kuwe ASAP!
Yenza kusebenze iTubi TV Guide
amaqembu akunikeza i-robux
bukela ama-movie weshashalazi mahhala online
umhlaba wamathangi ubhalise
indawo engcono kakhulu yama-movie e-bootleg
landa i-google cast app yamawindi 10